MIUI Theme Editor Tips – Xiaomi Guide
MIUI Theme Editor Tips
MIUI9တင်လိုက်မှ Fonts တွေ Themes တွေ အရင်လိုပဲပြန်ထည့်တာ မရတော့ဘူး.. Third Party error ဖြစ်နေတယ်… Unsupported ပြန်နေတယ်.. စသဖြင့် ဖြစ်နေကြတာလေးကို ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ သိထားသင့်တာလေးတွေပါ။
Themes လေးတွေ၊ Font လေးတွေကို MIUI ROM တွေမှာ ထည့်သုံးလို့ရအောင် mtz file အနေနဲ့တင်ပေးကြတယ်။ Share ပေးကြတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို ကိုယ်ကလဲကြိုက်ရင် Download လုပ်ထားတယ်။ အရင်က ကိုယ့် Mi Account ကို Designer Account ဖြစ်အောင်ုလုပ်ထားပြီး Themes Manager app ထဲမှာပဲ ကိုယ်ဒေါင်းထားတာတွေကို Import လုပ်တယ်။ Apply လုပ်သုံးကြတယ်။ အကုန်အဆင်ပြေတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Designer Account နဲ့ Import လုပ်ထည့်မယ်ဆိုတာကို လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ Themes Store ထဲမှာ တင်ထားတာတွေကိုသာ download လုပ်ပြိး Apply လုပ်ခွင့်ပေးတော့တယ်။ သည်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့ဆီမှာရှိနေတဲ့ Themes, Fonts mtz files လေးတွေကို ဖုန်းမှာထည့်သုံးနိုင်အောင် MIUI Theme Editor app လေးကို သုံးလားကြပါတယ်။ သူကလည်း MIUI update လုပ်ရင် လုပ်လာသလို၊ လိုအပ်သလို Update ပေးပါတယ်။
MIUI Theme Editor အလုပ်လုပ်အောင် အကောင်းဆုံးထည့်သွင်းနည်းကတော့ Google Play Store ကနေဒေါင်းထည့်တာပါပဲ။ အခြားသော APK Pure, 1Mobile တို့လို Third party android app store တွေကလည်း ယူထည့်နိုင်ပါတယ်။ Version နောက်ဆုံးဟာကတော့ Google Play Store မှာပဲ အရင်ရတတ်ပါတယ်။ သည်အတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Google services တွေ အဆင်ပြေပြေအောင် ဖြစ်အောင် ထည့်သွင်းထားရမှာပေါ့။ မရှိရင်လဲ အောက်ကလင့်ကိုဝင်ပါ။ Play Store link ပါပဲ။ Play Store ထဲပွင့်လာမှာပါ။ Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ MIUI 9.2 မှာ MIUI Theme Editor ကလည်း နောက်ဆုံး version ဖြစ်နေမှ ကိုယ်လိုသလို အလုပ်လုပ်မှာပါ။
[ Install MIUI Theme Editor From Google Play Store ]
MIUI Theme Editor နဲ့ Theme, Fonts တွေ ပြင်ထည့်တယ်ဆိုတာ….
အိုကေ.. MIUI Theme Editor နောက်ဆုံး version လဲ Install ထားပြီးပြီ။ ကိုယ်ထည့်သုံးချင်တဲ့ Theme, Font mtz files တွေလဲ ဖုန်းထဲရှိနေပြီဆိုရင်….
MIUI Theme Editor ကိုဖွင့်ပါ။ သူ့ကိုသုံးချိန် အင်တာနက်ရှိနေဖို့လိုအပ်လို့ ဖွင့်ထားပါ။ Free သုံးတာမို့ တက်တက်လာတတ်တဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေတော့ သည်းခံပြီး လိုက်ပိတ်ပါ 😀 😀 ကိုယ့်ဖုန်းထဲရှိနေတဲ့ mtz file ကို ပြင်ထည့်မှာမို့ Browse ဆိုတာနှိပ်ပါ။
ဖုန်း Internal Storage ထဲသိမ်းထားတဲ့ Theme or Font mtz file ကိုရွေးပါ။
ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ Theme or font mtz file ပေါ်လာပါပြီ။ အလုပ်စလို့ရပါပြီ။ Start နှိပ်ပါ။
အခြားဘာကိုမှနှိပ်မနေပါ။ Next သာနှိပ်ပါ။ သည်နေရာမှာပြင်လို့ရတာလေးတွေကို မိမိဖာသာ အားလပ်ချိန်မှာ တစ်ခုချင်းစီဝင်ကလိ၊ ပြင်ကြည့်၊ ထည့်ကြည့်ပါ။
MIUI Theme Editor က သူပြင်ပြီးသား mtz file တစ်ခု ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကို သိမ်းပေးထားမယ့် နေရာကတော့ Internal Storage ထဲက MIUI/themes folder အောက်မှာပါ။ Next သာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Theme or Font ကို Generate လုပ်နေပါမယ်။ ခဏစောင့်ပေးပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်မလားမေးပါမယ်။ တစ်ခါတည်းသာ OK နှိပ်ပြီး Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ သူပြင်ထားတဲ့ Theme or font ကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ Themes app ဖွင့်ပြီး မိမိလိုရာ ရွေး Apply ပါလို့ လာပြောတာပါ။ OK လိုက်ရင် Theme Editor Main screen ပြန်ရောက်ပါမယ်။ နောက်ထပ် mtz file ထပ်ထည့်လုပ်စရာရှိလုပ်ပါ။ လုပ်စရာမရှိပါက ပြန်ထွက်နိုင်ပါပြီ။
ပြီးရင်တော့ မိမိတို့ထည့်ထားတဲ့ Theme or Font ကို Themes app ဖွင့်ပြီး ရွေးနိုင်.. Apply လုပ်နိုင်ပါပြီ။ အဲသည်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် အင်တာနက်ဖွင့်ထားပေးနေစရာမလိုတော့ပါ။ MIUI Theme Editor နဲ့ပြင်ထည့်လိုက်ပါဆိုတာ သည်လုပ်နည်းလေးကို ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ မိမိဆီမှာ mtz file ရှိနေရင် ထည့်လို့ရပါပြီ။
Themes တွေ Free ဖြစ်အောင် သုံးချင်ရင်…
သည်နည်းကတော့ China ROM သုံးနေသူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါမယ်။ Global ROM မှာတော့ Free themes တွေချည်းပြပြီး လိုသလို ဒေါင်းထည့်နိုင်၊ သုံးနိုင်တာမို့ သည်နည်းက မလိုအပ်ပါ။
Themes app ကိုဖွင့်ပါ။ Preview တွေလိုက်ကြည့်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ Credit Theme တစ်ခုခုကိုဒေါင်းဖို့ဝင်ပါ။ Credit Theme မို့ ပုံမှန်လို့ Download button မပေါ်ပါ။ Try For Free ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းပါ။
ဒေါင်းပြီးသွားရင်တော့ ဘာမှနှိပ်မနေပါနဲ့…။ Back key နဲ့ဖြစ်ဖြစ်.. Home Key နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Themes ထဲကသာထွက်လိုက်ပါတော့။
MIUI Theme Editor ကိုဖွင့်ပါ။ သည်တစ်ခါတော့ ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ theme ကိုပြင်ရတာမို့ Pick A Theme ဆိုတာနှိပ်ပါ။ ဖုန်းထဲရှိတဲ့ themes တွေပေါ်လာပါမယ်။ Preview ကြည့်ပြီး မိမိဒေါင်းထားတဲ့ Theme ကိုရွေးပါ။ MIUI Theme Editor မှာ Start ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ပိုင်းသွားရမယ့်အဆင့်တွေကတော့ အပေါ်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ theme or font mtz ကိုထည့်ချင်ရင်လုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းမို့ အဲသည်အတိုင်းသာ နောက်ဆုံးအဆင့် Theme ကို Install ပေးသွားသည်ထိလုပ်ပါ။
MIUI Theme Editor က ထွက်ခဲ့ပြိးရင် Themes ထဲဝင်ကြည့်ပါ။ မိမိတို့ဒေါင်းထားတဲ့ဟာနဲ့ MIUI Theme Editor ကထည့်ပေးထားတာ နှစ်ခုတွေ့ပါမယ်။ တစ်ခုဆီဝင်ကြည့်ပါ။ ဒေါင်းထားတာမှာ Try Now ဆိုတာပဲပေါ်နေမှာပါ။ အဲဒါကိုဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ MIUI Theme Editor နဲ့ထည့်ထားတာကတော့ Apply button ပေါ်နေမှာပါ။ Apply လုပ်သုံးနိုင်ပါပြီ။
Theme mtz file များဒေါင်းထားချင်ရင်…
Global ROM သုံးသူတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ Credit Theme တွေ Free လုပ်ချင်ပေမယ့် သူတို့ Themes app ထဲမှာမပေါ်တော့ အထက်မှာပြောသလို Try For Free နဲ့ ခဏလုပ်လို့မရပါဘူး။ သူတို့အတွက်က mtz file ဒေါင်းထား.. ပြီးရင် အထက်ဆုံးမှာပြောခဲ့သလို MIUI Theme Editor လေးနဲ့ပြင်ထည့်.. Apply လုပ်သုံး.. အဲလိုနည်းနဲ့အဆင်ပြေမှာပါ။
ကျနော်ကတော့ ကွန်ပျူတာပဲသုံးလေ့ရှိတော့ အဲသည်မှာလုပ်တာနဲ့ပဲပြသွားပါမယ်။ ဖုန်းမှာလဲ တူတူပါပဲ။ Browser ဖွင့်ဆို ဖွင့်တယ်ပေါ့။ Link ကို copy ကူးတယ်ဆို ကူးတယ်ပေါ့. အဲလိုလိုက်လုပ်ရုံပါပဲ။ 😀
ကိုယ်အသုံးပြုနေကြ Browser ကိုဖွင့်ပါ။ Xiaomi Theme Store ကိုသွားပါ။ [ Go to Xiaomi Theme Store ] တရုတ်စာတွေနဲ့ကို E လိုမြင်ချင်ရင်တော့ Google Chrome browser ကိုသုံးပြီး Translate လုပ်ပေါ့။ 😀
မိမိနှစ်သက်ရာ themes တစ်ခုထဲဝင်ပါ။ Preview တွေကြည့်ပါ။ ကြိုက်ပြီဆို အဲသည် theme link ကို select မှတ်ပြီး copy ကူးပါ။
Browser tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ သည် Address [ Go to http://mtzfile.gq ] ကို ဝင်ပါ။ http://mtzfil.gq ဆိုတာပါ။ သူကတော့ mobile website ပါ။ ကွန်ပျူတာ browser ရဲ့ desktop view မှာတော့ နဲနဲကြီးနေပါမယ်။ 😀 😀
မိမိတို့ copy ကူးခဲ့တဲ့ Theme Store မှာ theme ရဲ့ detail link ကို paste လုပ် ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် GET button ကိုနှိပ်ပါ။
MTZ file ဒေါင်းဖို့ Ready ဖြစ်ရင်တော့ Size နှင့်တကွပေါ်လာပါမယ်။ နှိပ်ပြီးဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
သူလည်း AD ခံထားတာမို့5second စောင့်ရင်ဒေါင်းဖို့ file link ကျလာပါမယ်။ ကွန်ပျူတာမှာတော့ file မဒေါင်းမချင်း နှစ်ခါလောက် အဲသည် Continue ကိုနှိပ်ရင် ဒေါင်းသွားပါတယ်။ ဖုန်း browser မှာဆိုရင်တော့ AD Page လေးနှစ်ခုလောက်ပြန်ပိတ်ပေးပြီးမှ Download file ကျလာမယ်ထင်ပါတယ်။ 😀 😀
mtz file ရလာရင်တော့ ကိစ္စပြီးပါပြီ။ အထက်ဆုံးမှာပြောခဲ့သလို MIUI Theme Editor နဲ့ mtz file တွေ ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့နည်းနဲ့ ထည့်နိုင်ပါပြီ။ Global ROM တွေအတွက် သည်နည်းနဲ့ Credit theme ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Bro ​ေျပာတဲ့အတိုင္​း လုပ္​​ေပမယ္​့ original theme ​​ဘဲ ပျပန္​​ေရာက္​​ေရာက္​​ေနတာ
Bro ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေမယ့် original theme ဘဲ ပပြန်ရောက်ရောက်နေတာ
မှန်ပါတယ်.. ရောက်မှာပါပဲ.. ရောက်သွားရင် Themes ပြန်ချိန်းထားလိုက်.. မပိတ်မချင်းသုံးလို့အဆင်ပြေနေပါတယ်.. အခုချိန်မှာ အဲသည်လိုပဲ အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်ပါတော့မယ်…